यी ६ काम गर्नेलाई कहिल्यै मिल्दैन् लक्ष्मी माताको साथ ! निम्तिन्छ परिवारमा गरिबी र अशिक्षा
हरेक दिन भगवानको पूजा गरेर सोचेजस्तै कृपा पाउन सकिदैन् । धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख भएअनुसार भगवानको कृपा पाउनको लागि भगवानलाई सह्य हुने काम गर्नु पर्छ । नराम्रो काम देखि भगवान पनि रुष्ट भएका हुन्छन् । त्यसकारण परिवारमा अशान्ति र गरीबि उत्पन्न हुन्छ । आज हामी तपाईलाई के काम गर्दा लक्ष्मी माता
एउटै ढुंगाबाट बनेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शिव लिङ्ग ! ॐ लेख्नुस मनले चाहेको पुरा हुनेछ !
भगवान शिवको मन्दिर तपाई धेरै ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै मन्दिर यस्तो हुन्छ जहाँ एउटै ढुंगाबाट शिव लिङ्ग बनाएको छ। भारतको भोजपुर मध्यप्रदेशको राजधानी भोपालबाट ३२ किलोमिटर टाढा पर्छ। भोजपुरमा रहेको पहाडमा एक विशाल, अधुरो शिव मन्दिर रहेको छ। यो शिव मन्दिरलाई भोजेश्वर मंदिरको नामबाट चिन्ने गरिन्छ। भोजपुर तथा यो
भाग्यमानीसँग हुने यी ६ कुरा: तपाईसँग छ कि छैन ?
सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भईराख्दैन । यसै प्रसंगलाई लिएर महाभारतमा पनि विदुरले भनेका छन्, यदी कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ
यदि तपाइँले करोडपतिहरुको जन्मकुण्डली देख्नु भएको छ भने उनीहरुको कुण्डलीमा समानता हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार खास एक योग परेका ब्यक्ति करोडपति हुन्छन् । करोडपति बन्नका लागि योग मिलेको हनु पर्छ । त्यस्ता ब्यक्तिको राजयोग परेको हुन्छ । जुन ब्यक्तिको कुण्डलीमा गुरु धनु वा मीन राशीमा हुन्छ वा कर्कटको स्थानमा
तपाइ कुन दिशा पट्टी सिरान लगाएर सुत्नुहुन्छ । के सही दिशातिर त सिरानी लगाउनु भएको छैन कि । त्यसका तपाइको जिवनमा स्वाथ्यका साथै विभिन्न फाइदाहरु रहेका छन् । तर तपाइ भन्नुहुन्छ होला म अरु दिशातिर नै सिरान लगाएर सुत्छु त केही भएको छैन । त्यसो पनि हुन्छ तर सन्तुलित रुपमा
नेपालको गण्डकी प्रदेश, तनहुँ जिल्ला म्याग्दे गाउँपालिका ३, किलचोकमा अवस्थित श्री अकलादेवीको महिमा बखान गर्दा यहाँ स्थित देवीका मुर्ति बनावटी नभई त्यही रहेको शीलामा शिंह र नन्दीको आकृति रहेको छ। मन्दिर भित्र भएको विशाल शीलालेखलाई नै आद्यशक्तिको रुपमा अकलादेवीको नामले पूजा गरिन्छ, जुन मन्दिरको गजुरसम्म पुगेको छ। अकला मन्दिरमा रातिको
नयाँशक्ति र फोरम बिच औपचारिक एकता घोषणा बन्यो समाजवादी पार्टी !
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी बिच एकता भएको छ । सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा औपचारिक रुपमा एक भएको घोषणा गर्दै उनीहरुले नयाँ पार्टी “समाजवादी पार्टी” नेपाल भएको बताए । मधेशका मुद्दामा केन्द्रीत राजनीति गरिरहेको फोरम र माओवाद त्यागेर वैकल्पिक शक्ति बन्न खोजिरहेको
काभ्रे काण्ड : ७० बर्षिय आमा-बुवा डाको छोडेर रोए, ‘हत्यारालई फासी दे’ सिंगो गाँउमै रुवाबासी – भिडियो
काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–६ बस्ने २५ वर्षीया सरिता दाहाल (दुलाल)को हत्यामा संलग्न रहेका आरोपीहरुलाई आजीवन जेल सजायको माग गर्दै स्थानीय बासिन्दा र माइती पक्षले मंगलबार धुलिखेल प्रहरी चौकी घेराउ गरेका छन्। केहि दिन अघि सरिता दाहालले सहकारीमा काम गर्नका लागि नागरिकता बनाईदिन जेठाज्युलाई आग्रह गरेकी थिइन्। तर जेठाज्युले बुहारीलाई नागरिकता दिँदा
भाइरल बनिरहेको मृतक पतिको चितामा पत्नी जिउँदै जलेको यो सति ढुङ्गा !
संखुवासभाको खाँदवारी ९ मा अवस्थित मनकामना धामको बगरमा रहेको सति ढुङ्गा अहिले पनि चर्चामा छ । यो सति ढुङ्गा जहाँ मृतक पतिको चितामा पत्नी जिउँदै जलेका कारण अहिले पनि चर्चामा रहेको छ । सति प्रथा हुँदा यहि ढुङगामा सति जाने प्रचलन थियो । यो ढुङ्गामा कुनै समय आफ्नो मृतक पतिको
ज्योतिषमा कालो तिललाई धेरै महत्व दिइएको छ। यसको उपायले सबै समस्या टाढा हुनसक्छ। जान्नुहोस ज्योतिषका अनुसार कालो तिलको ५ उपाय, जसले गरीबी टाढा हुनसक्छ र भाग्यको साथ सधै मिल्छ। यी हुन् ति ५ उपाय :- १. हरेक शनिवार शुद्ध जलमा कालो तिल मिसाएर ऊँ नम शिवाय मन्त्रको जप गर्दै शिवजीलाई